Sida loo helo ogeysiisyada dhammaadka fulinta xukun amarka ah | Laga soo bilaabo Linux
Maalin dhaweyd, anigoo aqrinaya barta wanaagsan ee WebUpd8, waxaan soo helay qalab aan ku helo ogeysiin dhamaadka fulinta ee a amar gudaha terminal, kaasoo waxtar u yeelan kara kiisaska howshani qaadan karto dhowr daqiiqo.Shakhsi ahaan, uma maleynayo inay tahay xalka ugu fiican. Sababtaas awgeed, halkan waxaan ku soo jeedinaynaa beddelaadyo kale, lagu daray dhaqanka oo fudud.
2 Beddelka kale
Qalabka Andrew ku taliyay waa Unidstract-me.
Ku rakibidda gudaha Ubuntu iyo waxyaabaha laga helo:
sudo add-apt-repository ppa: aan kala soocin-aniga-baagagyaasha / maalin kasta sudo apt-get update sudo apt-get install unistract-me
Si aad u isticmaasho, waa inaad awood u yeelatid ikhtiyaarka "U orod amarka sida bogga soo galitaanka" boosteejada aad door biddo. Midka la yimaada GNOME waxaan awood u siin karnaa doorashadan hoosta Tafatir> Xulashooyinka Warbixinta.
Marka la rakibo, amar kasta oo qaata in ka badan 10 ilbidhiqsi wuxuu soo bandhigi doonaa farriin marka la dhammaystiro.
Si aad u rakibtid 'Undistract-me on distros' kale, waxaad ka heli kartaa tilmaamaha halkan.
Faa'iidooyinka hababka hoos lagu muujiyey waa dhowr:
waxay shaqeeyaan oo keliya marka isticmaalaha uu codsado
uma baahna rakibidda barnaamijyo dheeri ah (badiyaa baakadaha lagama maarmaanka ah ayaa horay loogu rakibay ku dhowaad dhammaan duruufaha caanka ah)
haddii caajisnimadu kugu cuntaan, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa qoraal
waa kuwo dhakhso badan, ma cunaan kheyraadka waana sahal in wax la barto
Si aad u muujiso farriimaha ogeysiiska Ubuntu-style ah, waa inaad ogeysiis-diris rakibtay. Ubuntu, Linux Mint, iyo noocyo kaladuwan ayaa la socda xirmadan oo lagu rakibay qaab ahaan. Isticmaalayaasha qaansada ayaa ka soo dejin kara AUR.
Kadib, kaliya ku dar && wargelin-dir "Waa la qabtay!" dhamaadka amarka waxaan rabnaa inaan fulino. Isagoo u maleynaya in amarka fulinta uu ahaa bisad:
faylka mukulaasha & ogeysiiska-dir "Waa la qabtay!"
Nidaamka ogeysiiska "kakooban" ee intaa ka sii badan waa Zenity, kaas oo aan ku soo bandhigi karno sanduuqyo wada hadal oo leh badhanno, iwm.
Sida ogeysiiska-dir, kaliya ku dar && zenity –info –text = »Dhamaaday!» dhamaadka amarka waxaan rabnaa inaan fulino. Isagoo u maleynaya, mar kale, in amarka lagu fulinayo uu ahaa bisad:
mukulaasha bisadda && zenity --info --text = "Amarka dheer ayaa la dhammaystiray."
Tilmaam xiiso leh: waa suurtagal in lagu beddelo & &; in lagu daro walxo silsiladda amarka in la dilo. Tusaale ahaan, faylka bisadda && ls joogi lahaa faylka bisadda; ls.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Sida loo helo ogeysiisyada dhamaadka fulinta amarka ku yaal terminalka
Aragti ahaan tani sidoo kale way shaqeyn kartaa: »cat file && echo -ea«, waxay soo saartaa dhawaq dhamaadka amarka (in chakra ma shaqeyso). Ku saabsan Talo-bixinta (haddii aanan fahmin), "command1; command2" lama mid aha "command1 && command2"; Xaaladda kowaad, amarka2 waa la fuliyaa iyadoon loo eegin inuu amarka1 sifiican u dhammeeyay, kan labaadna waxaa la fuliyaa oo keliya haddii amarka1 si sax ah u dhammeeyo Salaan iyo qoraal wanaagsan, waxaan jeclaa ogeysiinta-dirista, oo aad wax ku ool ah
Jawaab Esteban Saracho
waxtar badan! tijaabinaya…
Waad salaaman tahay, badiyaaaba waxaan u isticmaalaa xulashadan si ka wanaagsan:
faylka bisadda; zenity –info –text = »Amarkii dheeraa oo la dhameystiray.» &
Tani waxay ii oggolaaneysaa inaan dhigo wax ka badan hal ogeysiis ah, kumbuyuutarkuna uusan xirmin illaa aan ka riixo.
Ku rakibidda OSSEC iyo Fail2ban shirkadda Debian